Maka vola hatramin’ny 1 500 000 Ar: tratra ilay mpisoloky ho mpandefa mpiasa any ivelany | NewsMada
Olona iray indray no voasolokin’ny ramatoa (eo amin’ny sary) iray milaza fa afaka mandefa mpiasa any ivelany. Efa nahazoany vola 1 500 000 Ar ilay vehivavy kanefa tsy nisy akory ilay asa…
Nidoboka am-ponja eny Antanimora taorian’ny fisamboran’ny polisy azy ny renim-pianakaviana iray mpisoloky ho mpandefa mpiasa any ivelany. Ny polisy avy ao amin’ny sampandraharaha misahana ny fanadihadiana manokana no nahasambotra azy, ny 17 lasa teo. Araka ny fanazavan’ny polisy, efa tamin’ny volana janoary 2019 ity renim-pianakaviana ity no nampanantena olona iray avy any Mahajanga fa misy asa azo andefasana azy any ivelany raha liana izy. Vola 1 500 000 Ar no efa naloan’ilay olona tamin’ity mpisoloky ity izay nolazainy fa hikarakarana ny taratasy rehetra ilaina amin’izany fandefasana azy hiasa any ivelany izany. Niakatra aty an-dRenivohitra mihitsy io olona voasolokiny io niandry ny fotoana hiaingany ary nipetraka tao amin’ilay renim-pianakaviana mpisoloky nandritra ny telo herinandro nefa tsy nisy vokany izany. Tsy vitan’izay fa nilaza tamin’ity voasoloky izy fa misy lehilahy iray hafa koa lazainy fa tompon’ny “agence” mpandefa mpiasa any ivelany mikarakara ity olona efa nandoa vola ity.
Lehilahy iray karohin’ny polisy…
Niverina nody any Mahajanga ihany ilay olona nosolokiny rehefa tsy nisy tohiny mihitsy ny fampanantenana natao azy sady leo tamin’ny fandrirarirana nataon’ity mpisoloky ity izy. Nametraka fitoriana tao amin’ny polisy misahana ny fanadihadiana manokana izy taorian’izay. Nandritra ny famotorana ilay niharan’ny fisolokiana no nahasamborana ilay ramatoa mpisoloky izay niaiky tanteraka ny heloka vitany. Natolotra ny fampanoavana izy ka naiditra am-ponja taorian’izay. Karohin’ny polisy kosa ny lehilahy iray mpiray tsikombakomba amin’ity mpisoloky ity.
Mbola misy ihany ireo olona voasolok’ireny olona na ivontoerana milaza fa afaka mandefa mpiasa hiasa any ivelany ireny. Efa nisy fepetra noraisin’ny fanjakana fa aato aloha ny fandefasana olona hiasa any ivelany, indrindra ireo any amin’ny tany Arabo. Efa nampodian’ny fanjakana avokoa aza ny ankamaroan’ireo vehivavy miasa any amin’ny tany arabo noho ny herisetra nianjady tamin’ireo vehivavy malagasy niasa tany an-toerana.